मन्त्रीको राजीनामा दूतावासको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी ? – Lokpati.com
नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री सरकार चितवन नेकपा मृत्यु अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड केपी शर्मा ओली पक्राउ राशिफल नेपाल प्रहरी अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Feb 21, 2020
काठमाडौं, ९ फागुन। सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा स्वीस कम्पनिका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश शर्मा मिश्रसँग सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मागेपछि मन्त्री मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा दिएका मन्त्री बाँस्कोटाको चर्चा अझै सेलाएको छैन।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा स्वीस कम्पनिका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश शर्मा मिश्रसँग मोलमोलाइ गरेको अडियो बुधबार सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा मन्त्री बाँस्कोटालाई बालुवाटार बोलाएर बुझेपछि बाँस्कोटालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। यता नेपाली कांग्रेसले बाँस्कोटाको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको संसदलाई जानकारी गराएका थिए।
तर, मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामाका लागि कुनै विज्ञप्ति जारी गरेनन्। न त प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले उनलाई मन्त्रीबाट हटाएको विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो। पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले साँझतिर आफ्नो ट्वीटमार्फत् आफ्नाबारे प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको जानकारी गराए। बिहीबार दिउँसो नै स्वीस दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको कमिसन प्रकरणमा दूतावासको कुनै संलग्नता नभएको प्रष्ट्यायो।
अचम्मको कुरा त यो भयो कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वीस दूतावासको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेर मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको जानकारी गरायो। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक एकाउण्टबाट स्वीस दूतावासको विज्ञप्ति शेयर गर्दै भनिएको छ, ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भनिएको फेसबुक एकाउण्टमा व्यक्तिकाे नाम छैन। तर, फोटो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको छ। थापाको फोटो भएको र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार लेखिएको एकाउण्टबाट स्वीस दूतावासको विज्ञप्तिमार्फत् सञ्चारमन्त्रीको राजीनामाको जानकारी दिनु कुटनीतिक मर्यादाविपरीत मानिन्छ। एउटा देशको दूतावासले कमिसन प्रकरणमा आफूहरुको संलग्नता नभएको विज्ञप्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीको राजीनामासँग जोडेर जानकारी दिनु निकै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीकै एकाउण्ट वा ट्वीटर ह्याण्डिलबाट सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएको कुरा सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो। त्यति नभए सचिवालयकै एकाउण्टबाट सञ्चारमन्त्रीको राजीनामाबारे जानकारी दिन सकिन्थ्यो। सञ्चारमन्त्रीको राजनीमाको जानकारी गराउने स्रोत कुनै दूतावासको विज्ञप्ति हो ? स्वीस दूतावासको विज्ञप्तिपछि यसबारे चर्चा हुन थालेको छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रेस सल्लाहकार किन गम्भीर देखिएनन् ?
स्वीस दूतावासको कमिसनमा आफूहरु संलग्न नभएको विज्ञप्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट शेयर हुनु निकै दुखद कुरा हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो सन्देश जान्छ ? नेपालको कमिसनका विषयमा कुटनीतिक समाधान खोज्ने कि कमिसन काण्डलाई दूतावासको विज्ञप्तिलाई बढाइचढाइ गरेर प्रचार गर्ने ? दूतावासको विज्ञप्तिलाई नेपाल सरकारले प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। यसले सचिवालयको अपरिपक्व कुटनीतिक क्षमतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
बिहीबार साँझ पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले स्वीस दूतावासले आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको आसयको अभिव्यक्ति दिएका दिए। ‘साँचो के हो भन्ने कुरा त दूतावासको विज्ञप्ति हेरे पनि थाहा भइहाल्छ नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर बाँस्कोटाले आफूलाई चोख्याउन प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दूतावासको विज्ञप्ति शेयर गरेर सञ्चारमन्त्रीको राजीनामाबारे जानकारी गराउनु बाँस्कोटा निर्दोष छन् भन्ने सन्देश दिनु हो। जुन कुरा छानविनमा छ, त्यसमा चोख्याउने सचिवालयको प्रयास अर्को कमजोर हो।
परिस्थिति गम्भीर बन्दैछ, हामीले विश्वास गुमाउँदैछाै‌ं : प्रचण्ड
प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘पहिला स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बचाऔं’
यसरी पत्ता लाग्यो १९ वर्षे युवतीको कोरोना
तीन महिनाको घरभाडा नलिने लामिछानेको घोषणा